ChiGerman Mufudzi Pitbull Sanganisa - Yakazara Yevaridzi Gwaro - Inobereka
Mufudzi wechiGerman Pitbull Sanganisa - Iyo Yakakwana Yevaridzi's Nhungamiro
Mufudzi wechiGerman Pitbull Musanganiswa unobva pamarudzi maviri ari maviri akavanzwa kuseri kwechinyadzo, zvichiita kuti rudzi urwu rwunakidze zvikuru.
Staunch, yakasimba, inotyisa uye yakashinga asi yakavimbika uye ine rudo.
Iyo nharo inoenderera, yakaipa bhonzo ? Kana nyoro uye gooey nechomukati?
Imbwa yakasanganiswa inosvika 26 inches pakureba, uye 70 kusvika 90 mapaundi pakurema, vanoita imbwa huru yekuchengetedza chero mhuri. Imbwa inoshanda nehunhu, asi, ine mudzidzisi chaiye, zvirokwazvo imbwa yakavimbika pamoyo.
Muchinyorwa chino tinofukidza zvese zvaunoda kuti uzive nezvePitbull ChiGerman Mufudzi Musanganiswa kubva pahunhu hwavo, kurerukirwa kwekutarisira uye yavo yekurovedza uye yekudzidzira zvinodiwa.
Rudzi urwu runogona kuve rwakakodzera here kune muridzi wembwa ane ruzivo senge iwe? Ramba uchiverenga kuti uwane.
ChiGerman Mufudzi Pitbull Sanganisa Info Tafura
Chinangwa Kushanda / Shamwari
Inokodzera For Vanoziva Imbwa Varidzi
Saizi 18 kusvika 26 ″ (murume) uye 17 kusvika 24 ″ (mukadzi)
Kurema 40 kusvika 90 lbs (murume) uye 30 kusvika 70 lbs (mukadzi)
Hupenyu Makore gumi kusvika gumi nemaviri
Ruvara Kusiyana Tani, nhema kana fawn
Kudzikama Anesimba, akavimbika, akangwara uye ane rudo
Exercise Yemazuva ese Yakakwirira - maminetsi makumi mapfumbamwe ekurovedza muviri pazuva
Maitiro Ekuita Pakati nepakati - Yakaderera kurovedza muviri uye kwakanyanya kwepfungwa chiitiko
Kudya Kwezuva Nezuva Kudya 1200 kusvika 2700 macalorie pazuva (murume) 900 kusvika 2,100 macalorie pazuva (mukadzi)
Nyaya dzinozivikanwa nezvehutano Kurwara kweganda (Atopic Dermatitis) uye Canine Hip Dysplasia
Chii chinonzi Mufudzi Gomba? Kubereka Kuongorora
ChiGerman Mufudzi Pitbull Sanganisa Mbwanana
Kubereka Nhoroondo uye Kwakatangira
ChiGerman Mufudzi Pitbull Sanganisa Temperament
Maitiro Ekutarisira Pitbull yeGerman Mufudzi Muvhenganisa
Mufudzi Gomba anofanira kudya zvakadii?
ChiGerman Mufudzi Pitbull Sanganisa Kudzidziswa
Kuonekwa kweGerman Mufudzi: Bhachi, Ruvara uye Kushambidzika
Mufudzi akavimbika uye akangwara wechiGerman anoyambuka aine akasimba American Pitbull Terrier achizvara weGerman Mufudzi Pitbull Mix.
Kuva rudzi rwakavhenganiswa, iyo yeGerman Shepherd Pitbull puppy haina kuzivikanwa nechero hombe yeKennel Club uye kune vashoma vashoma vanozivikanwa vafudzi.
Iyi imbwa yakavhenganiswa imbwa inoberekwa kana a ChiGerman Mufudzi (dhamu) iri kupisa uye vakaroorana neAmerican Pitbull Terrier (sire).
Hukuru hwemarara eGomba reGerman ingangoita mashanu kana masere embwa nehuremu hwembwanana hunodhura pakati pe $ 200 kusvika $ 600 USD. Rudzi urwu haruna kujairika saka mubereki akanaka anogona kunetsa kuwana.
Iyi imbwa yakasanganiswa inobereka inotora mushe kumvura ichivaita shamwari yakanaka kune chero imbwa-inoshamwaridza pamhenderekedzo
Kuti unzwisise zvirinani nhoroondo uye kunyangwe iyo yeGerman Mufudzi Pitbull musanganiswa kuzvibereka pachako, zvakakosha kuti uzive kwavakabva.
Mufudzi wechiGerman akatanga muna 1899 as imbwa inofudza kuGermany . Ivo rudzi rwakangwara uye runoshanda nesimba izvo zvinoita kuti ive canine yakakwana yeuto uye mapurisa anoshandisa kutenderera pasirese. Mufudzi anozivikanwa seimwe yemhando dzakakurumbira dzeGerman.
IAmerican Pitbull Terrier zvakare rudzi rwakangwara, rwakatanga kubva kumhando dzenzombe muUnited Kingdom . Pane imwe nguva rudzi urwu rwakaunzwa kuAmerica vakakurumidza kuwana zita idzva re 'American Pitbull Terrier'. Vakaberekwa kuve imbwa dzakasimba dzekurwa asi munguva pfupi vakava 'nanny imbwa' nekuda kwehunhu hwavo hwakapfava uye inonakidza repertoire yakatenderedza vana.
Mufudzi wechiGerman Pitbull Mix akatanga kuoneka muUnited States muma2000. Sezvauri kuona kubva pakubereka kwavo kwevabereki, musanganiswa uyu waifanirwa kuve ungwaru uye rudo, pamwe nekushanda nesimba.
Zvinosuruvarisa kuti rudzi urwu kazhinji kazhinji rwakaipa inobatana nekuva nehasha zvakanyanya uye zvine ngozi zvakare. Izvi hazvingagone kuwedzera kubva pachokwadi. Izvo hazvisi zvekuzvara pachazvo asi zvakanyanya kudaro, unochengeta zvakadii uye simudza mwana wako.
Nedzidzo yakakodzera, kurovedza muviri uye kushamwaridzana kwakakodzera , irudzi urwu rune hushamwari zvakanyanya uye rune rudo kune nhengo dzemhuri dzichivaita sarudzo inotyisa semhuka yemhuri.
Ndiwo akatoita rudzi rwakakwana rwevana, kunyanya semubereki wavo (pitbull) anozivikanwa sembwa nanny .
Ingo ita shuwa kuti hausi kungoisa mbwanana yako zvakafanira kuvana vadiki uye kuvadzidzisa izvo zvinokosha zvekuita nezvisingaitwe zvemabatiro emhuri yako; sezvaungaita chero imbwa. Mwana wako anofanira kuda nekuremekedza vese vemhuri kusanganisira ako mana-makumbo!
Chero bedzi imbwa iyi ichipihwa yakakwana kurovedza muviri zuva nezuva (kumusoro kwemaminetsi makumi mapfumbamwe), uye yakanaka yakavharika kumashure, ipapo vanozove vakanaka munzvimbo dzavanogara uye havafanire kutora hunhu husingadiwe sekutsenga kana kuhukura.
Rudzi urwu haruna kukodzera kugara kwemafurati madiki sezvo iwo ane yakakwira simba nhanho. Sarudza rudzi rudiki kana zvirizvo, vakadai seanotya Jack Russell Chihuahua Mix .
Rudzi urwu rwakavhenganiswa rwakakodzera kwazvo kune muridzi wembwa ane ruzivo.
Iine muridzi chaiye, uyo anonzwisisa kukosha kweiyo chaiyo uye yekutanga kushamwaridzana uye kudzikamisa kudzidziswa, izvi zvinogona kuve zvine rudo uye zvakapusa kutarisira imbwa. Zvisinei, zvakakosha kuti iwe uite tsvakurudzo yako usati watarisa rudzi urwu.
Kudya kwakadzikama kunovhara zvinovaka muviri, pamwe nekoriori yakakodzera uye kudya kweprotein, kwakakosha mumhando inoshanda seGomba reGerman.
Paavhareji, canine hombe uye inoshanda inoda kutenderedza makumi matatu emakumi emagetsi esimba pondo yehuremu hwemuviri. Nekudaro, izvi zvinogona kuchinjwa mukupindura zera ravo, saizi uye nhanho yechiitiko.
Mazuva ese maCalorie
Murume 1,200 kusvika ku2 700 macalorie
Mukadzi 900 kusvika 2 100 macalorie
Sezvauri kuona, iyo yeGerman Mufudzi Pitbull Musanganiswa ine yakakwira caloric inodikanwa. Sarudzo yakanakisa yerudzi urwu ndeyekuvapa chikafu chakasarudzika chemhando yepamusoro chakaomeswa-chakaomeserwa chakagadzirirwa rudzi rukuru uye runoshanda.
Iyo Gomba reGerman rinenge richinyatso kuda yakawanda yekubheka, saka zviri nani kupatsanura feedings. Paunenge uri mwana, edza kupatsanura servings muzviviri kana zvitatu zvekudya zuva nezuva.
Kunge mamwe Mufudzi Masanganiswa , nekungotarisa zverudzi urwu, zviri pachena kuona kuti vane yakasimba uye yakasimba muviri.
Kuita maekisesaizi zverudzi urwu hakusi kungo 'nhungamiro' uye zvakakosha kuti zvisangane. Pasina kurovedza muviri kwakakodzera rudzi urwu runogona kuwira mutsika yemaitiro anoparadza sekuhukura zvakanyanya, kuchera kana kutsenga kusingadiwe.
Iyo yeGerman Pit Mix ndeyechokwadi iyo 'gym-junkie' yakaenzana nevanhu mune imbwa fomu. Vanoda kurovedza muviri uye vanoda yakawanda yacho. Zvinokurudzirwa kuti rudzi urwu rwunopihwa maminetsi makumi mapfumbamwe ekurovedza muviri pazuva.
Haisi yakakura pakumhanya? Wobva waedza kuchovha bhasikoro. Simply svetuka pabhasikoro rako uye batisisa pane yako mbichana mbichana uye rega ivo vamhanye padivi pako.
Chero rinosara-pamusoro pekurovedza nguva rinofanirwa kushandiswa seyokutamba nguva yako neyako pup. Izvi zvakare zvichakupa iwe neyako ina-makumbo mana shamwari bhonasi yekubatanidza nguva uye ndechimwe chikuru sosi yekusimudzira kwepfungwa iyo ichave inovaraidza iwe nemwana wako.
Unogona kuedza mutambo we Flip Mukombe !
Mutsara unosvika matatu makapu kumusoro
Pamberi pomwana wako, viga mushonga pasi pemumwe mukombe
Kumbira imbwa yako kuti iise paw yayo pane imwe kapu
Tarisa sezvo imbwa yako inofungidzira kuti ndeupi mukombe une mushonga
Ipa imbwa yako mubairo (chikafu kana rumbidzo)
Mutambo uyu unogona kutora nguva kuti udzidze saka shivirira! Neraki, iyo Gomba reGerman rudzi rwakangwara runofarira chikafu saka vanofanirwa kuve nemutambo uyu wakazofungidzirwa pasina nguva!
Ichokwadi kuti rudzi urwu rwunozivikanwa nehungwaru hwavo, zvisinei zvinofanirwa kunyeverwa kuti rudzi urwu runogona kunge rwakaomesa kana zvasvika pakurovedza kwakakodzera kurovedza.
Iyo Gomba reGerman zvirokwazvo rudzi rwunofanirwa kuchengeterwa varidzi vane imbwa vane ruzivo, uye inogona kunge isiri iyo yakanakira yekutanga nguva.
Kubva kubva mhando mbiri dzakazvimiririra kwazvo , imbwa iyi inoda kutora chinzvimbo semutungamiri wepaketi. Naizvozvo, zvakakosha kuti chirongwa chakakodzera chekudzidzisa chigadziriswe munzvimbo.
Nguva, moyo murefu uye kusimbisa kwakanaka zvinhu zvitatu zvakakosha izvo Pitbull wechiGerman Mufudzi Sanganisa muridzi anofanira kugara nazvo. Kungave kuri kuyedza kukanda pamusoro pembwanana yakasindimara; asi usadaro. Kusimbisa kusimba uye kudzidzisa kutonga kwakaratidza kuve kusingabatsiri uye inogona kukanganisa garandi yembwa saka tora zvakawanda zvekubata uye kurumbidza kugadzirira ( pamwe kunyange imwe shrimp ).
Kushamwaridzana kwakakodzera muGerman Mufudzi Pitbull musanganiswa inofanirwa kuve chikamu chechero chirongwa chedzidziso yeanoda imbwa.
Icho hachisi chakavanzika kuti imbwa dzakadai seGerman Shepherd uye Pitbull dzakashurikidzwa nezita rerudzi rwehasha. Naizvozvo, izvi zvakare zvinotarisirwa mu vana vavo vakavhengana .
Izvo zvakaratidzwa kuti puppy kushamwaridzana kunoderedza hutsinye hunhu mukukura pamwe nekuzvidya moyo uye kutya. Saka ive shuwa yekuwadzana mwana wako kuitira kuti vawane mukana wepamusoro wekukura kuve nhengo yemhuri ine hunhu.
Kushamwaridzana mune imbwa yako kuri nyore, asi, kunodya nguva. Zvese zvaunoda kuti uite kuzivisa uye kushushikana nembwanana yako kune vanhu vazhinji, zvisikwa uyezve, nharaunda. Unogona kuedza:
Imbwa dzakanaka mapaki
Imbwa yekuchengeta zuva
Dzese idzi nzvimbo dzinovimbisa kuti yako canine shamwari inopindirana neyemhando yevamwe mainiini nevanhu pamwe nenzvimbo dzakasiyana dzinogona kusanganisira pane uye kubvisa leash kudyidzana.
Pano, isu tichakuziva iwe nezve maviri anozivikanwa matambudziko ehutano ePitbull German Mufudzi Musanganiswa.
Mufudzi wechiGerman anokwanisa kubatwa nemajini Hip Dysplasia , uye unogona kuipfuudza kune mwana wako. Ichi chirwere chinoratidzirwa nekushomeka muzvibatanidzwa zve canine hudyu. Izvi zvinogona kukonzera kukamhina uye kurwadziwa kunoramba kuripo.
IAmerican Pitbull Terrier inozivikanwa kuva nehunhu hunowedzera pakubata kwevamwe sema Atopic Dermatitis .
Atopic dermatitis chinhu chinopisa ganda mamiriro anogona kukonzerwa nekuda kwezvakatipoteredza zvinhu senge huswa, uye mold spores.
Kuti udzivirire kuwanda kwayo mumwana wako ita chokwadi chekuchengeta imba yako yakachena uye nekutarisa kuwanda kwekushandisa mishonga yekuuraya zvipuka mumapaki embwa!
Sezvauri kuona, dzimwe dzembudzi dzadzo musanganiswa wakanaka wevabereki vese vakasununguka.
Vakashinga muhukuru hwavo, rudzi urwu rwakasimba uye rwakamira kureba nemurume anosvika 26 inches pakureba uye mapaundi makumi mapfumbamwe pakureba.
Chiso chavo chinowanzo fananidzwa sevabereki vavo vePitbull nemusoro muhombe, mupfupi mhete uye zvishoma dzakakotama nzeve. Dzimwe nguva, vanogona kuve nehurefu hwakareba seGerman Mufudzi, zvinonyatsoenderana nembwanana-ne-mbwanana hwaro.
Gomba reGerman rine muscly muviri wakafukidzwa mupfupi kusvika pakati nepakati uye gobvu (zvinoenderana nemagene avo). Jasi ravo rinogona kudzorwa nemubereki wavo wechiGerman Mufudzi kana mubereki wavo wePitbull. Zvakangodaro, iwo makushe anowanzo kuve tan ane chigaro dema. Mamwe mavara ejasi anosanganisira nhema uye nyangwe fawn.
Zviripachena, kutaridzika kweGerman Mufudzi Pitbull Muvhenganiswa ungasiyana zvakanyanya uye marara ega ega angave aine huwandu hwakawanda hweanotaridzika akasiyana ehuku. Asi usazvidya moyo kuti ese akasimba, ane mhasuru uye akakura.
Zvinodikanwa zvekushambidzika kwerudzi urwu zvinogona kusiyana zvakanyanya zvichienderana nekuti ndeupi rudzi hwakanyanya kutaridzika pakuonekwa kweGerman Mufudzi Pitbull Sanganisa mbwanana.
Semuenzaniso, Mufudzi wechiGerman ane jasi rakapetwa kaviri iro rinodonhedza kazhinji. Kana bhachi rembwanana rako rakafanana nemubereki wavo wechiGerman Mufudzi saka kubrasha nguva dzose kwakakosha. Nekudaro, kana jasi remuputi wako rotora mushure memubereki wavo wePitbull saka kukwesha nguva dzose hachisi chinhu chakakosha sezvo zvisingaite kuti imbwa yako pfupi yembwa idurure kazhinji.
Panyaya yekuchengetedza kwembwanana nguva dzose, iyi yeGerman Mufudzi Musanganiswa haina chero zvakawandisa zvinodiwa. Kucheka kwembambo nekugeza zvinofanirwa kupihwa zvese pazvinenge zvichidiwa.
Usakanganwa kugara uchiongorora mazino kuti uderedze mukana wekurapwa kwemazino usingadiwe, edza kukwesha mazino echiputi chako nguva dzose .
Rudzi rwakavimbika, rwakangwara, runodzivirira uye rwakashinga. Yakakwana kune ane ruzivo imbwa muridzi ane anoshingaira mararamiro.
Iine simba rakakura uye kudzidziswa zvinodiwa, ichiperekedzwa nemumhanyi uye yakasimba kuvaka, imbwa iyi inokodzera kumhuri inofarira kana munhu.
Iine inoenderana uye yakanaka yekudzidzira hutongi, urwu rudzi runogona kuchinjika kuti rive rakanakisa-makumbo mana kuwedzera kune ine rudo imba.
Chero bedzi iwe uchiziva nezvesimba ravo rakakura uye uchikwanisa kugadzirisa rudzi urwu, saka haufanire kunge uine dambudziko pakuvagamuchira mumoyo mako.
Regedza kushorwa kwakashata, rudzi urwu nderwe rudo sezvaunozviita iwe. Mufudzi wechiGerman Pitbull Musanganiswa anogara aine nzvimbo mumoyo wavo wakashinga kwauri. Goverana zviitiko zvako nerudzi urwu pazasi.
Rhodesian Ridgeback: 10 Chokwadi Nezve Africa Shumba Imbwa
7 chokwadi chaunofanira kuziva usati watora Fox Red Lab
imbwa dzvuku dzemufudzi weGermany
miniature husky yakazara saizi yakakura
imbwa dzekuRussia dziri pamutemo matiri
imbwa iri kugaya zvakanyanya